UGenevise Nnaji Uba lilungu le-Oscar Academy-Iindaba zaseNigeria
GU-enevieve Nnaji uba lilungu le-Oscar Academy, u-Jaji uvimba umda kaTrump wokukhuselwa, u-Bukayo Saka utyikitya isivumelwano seArsenal. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla. Iindaba zeNeneji. Genevisa Nnaji 2020.
1. UGenevieve Nnaji ulilungu le-Oscar Academy
Umlingisi waseNigeria kunye nomphathi weefilimu, Vuselela uNnaji, uveza ikratshi lakhe emva kokuba ebeyinxalenye yabadlali nabadlali abagqibeleleyo abangama-819 ukujoyina ubulungu beOscar Academy. Wayemenyelwe yiAkhademi yoBugcisa beMoto yeMoto kunye neeNzululwazi ukuba ajoyine iklasi yobulungu ye-Academy. Iindaba zeNeneji.
UGenevieve Nnaji kunye nabanye ababengenile bakhethwa ukuba babe ngamalungu e-Oscar Academy ngenxa yegalelo labo elikhulu kwimifanekiso eshukumayo yemidlalo yeqonga kwaye bazibalule kwimveliso yeefilimu. Bakhethwa kumazwe angama-68. UGenevieve Nnaji ayinguye kuphela umntu waseNigeria kuluhlu olude njengomlawuli weefilimu UAkin Omotoso wenza uluhlu. Genevisa Nnaji 2020.
2 I-Bozoma Saint John egama lingu Nomphathi oyiNtloko weNtanethi
INetflix yonyule usomashishini waseGhana-waseMelika, I-Bozoma "Boz" i-John eNgcwele, ukuba libe liGosa lakhe leNtengiso eliyiNtloko. Ushiya i-Endeavor, apho akhonze khona njenge-CMO ukusukela ngonyaka ka-2018. Umsebenzi wakhe ophantse wasebenza iminyaka engama-20 waseSpeyin wenza imisebenzi emininzi kubandakanya umculo kunye nokuzonwabisa, iimpahla ezifakwe ngabathengi, ifashoni, ezemidlalo, kunye neemoto.
Phambi kuka-Endeavor usebenze e-Uber njengeGosa eliyiNtloko leBrand; WayeyiNtloko yokuThengiswa kwabaThengi beHlabathi ye-Apple Music kunye ne-iTunes, nangaphambi kwentloko yeQela loMculo kunye noLonwabo kwiNtengiso yePepsi-Cola North America.
3. UMzantsi Afrika: Umzimba katitshala wasetyhini, oneminyaka engama-25, ofunyenwe eNtshona Ntshona
Umzimba katitshala oneminyaka engama-25 ubudala, ochongiweyo njenge Khumontle Mokgosi, wafunyanwa kwindawo ahlala kuyo kwilali yaseMagong kufutshane neMogwase eMantla Ntshona ngoMvulo, ngoJuni 29. Umkomishinara wePhondo eNorth West uLieutenant General Sello Kwena Uvakalise ukothuka ngokubulawa kukaKhumontle Mokgosi.
Ngokwolwazi esinalo ngamapolisa, abamelwane kunye namalungu eBhunga loLawulo leSikolo (SGB) baphanda emva kokuba utitshala omncinci ethe akwanika ingxelo ngomsebenzi. Umzimba ka-Khumontle Mokgosi ongaphilanga wafunyanwa izandla neenyawo ziboshwe. Kutyholwa ukuba ubekrwelwe.
4. Umgwebi uvimba umda kaTrump kukhuseleko, esithi lwenziwe ngokungekho semthethweni
Ijaji yomanyano iyalele ukuphatha kukaTrump, ngoLwesibini, ukuba ayeke ukunyanzelisa umthetho wokungena kwabantu abangafanelekanga kubahlali baseMexico ukusuka e-asylum kumda osemazantsi e-US, esithi isithintelo ebanzi senziwe ngokungekho mthethweni ngehlobo lowama-2019.
iJaji UTimothy Kelly Inkundla yase-US yesithili eWashington yathi ishukume yawutshitshisa lo mthetho, ngumzamo odityanelweyo liSebe lezoBulungisa kunye noKhuseleko lwaseKhaya ngenxa yokuba ukuphunyezwa kwawo kwaphula umthetho wolawulo-mithetho. Ngokukodwa, uKelly uthe ulawulo lwalunike inkcazo engalunganga yokuvumela uluntu ukuba lubone kwaye luvakalise izimvo zalo kuyilo lomgaqo-nkqubo ngaphambi komiliselo lwalo.
5. UBukayo Saka usayina isivumelwano esitsha seArsenal
IArsenal Bukayo Saka utyikitye isivumelwano sexesha elide kunye neqela lePremier League. Umdlali oneminyaka eli-18 ubudala ungene kwiqela lokuqala lamaGunners kule sizini, esenza ama-33 ukubonakala. Isivumelwano esidlulileyo saseNgilani se-Under-19 samazwe aphesheya sasibangelwe kukuphelelwa lixesha kwihlobo elizayo, kukhokelela kwiingxelo angazishiya.
Saka Thumela: “IArsenal liqela lam. Ndonwabile ukuba ekugqibeleni ndibhengeze ixesha lokwandisa ikhontrakthi. ”
Umlawuli wezobugcisa eArsenal Edu wathi: “Oku kubaluleke kakhulu kuthi njengoko siqhubela phambili njengeklabhu. Le yinto wonke umntu obandakanyekayo afuna ukuba yenzeke kwaye siyavuya kuba uBukayo utyikitye isivumelwano esitsha sexesha elide. "
Nantsi indlela i-Girl Girl Genevisa uNnaji afuna ukuba uyonxiba ngayo kulo Lwesihlanu
Uhlobo Rave Julayi 1, 2020